Yusuf Garaad: General Cadde Muuse - Qeybta Labaad
Aqoonteyda kooban ee Cadde Muuse - Qeybta Labaad uguna dambeysa.
Waa London. Waa Galab. Waa 2006. BBC ayaan ka sii deynay dood ku saabsan Galmudug. Sida dhaqan ii ahayd habeenkii inta aanan shaqada ka rawaxin ayaan wacay dhowr ruux oo gacan naga siiyay helitaanka dadka aan maalintaa wareysannay si aan ugu mahadceliyo weydiiyana sida Barnaamijka loo arkay.
Dadka aan wacay waxaa ka mid ahaa Jibriil Cabdulle (CRD) oo markaa joogay Gaalkacyo. Waxaan ogaa in magaalada ay kaabiga ku hayaan ciidammo ka socda Maxaakimtii uu Madaxda u ahaa Shiikh Shariif Shiikh Axmed. Oo inta badan Koofur iyo Bartamaha dalka gacanta ku dhigay muddo aad u kooban. Mahadcelin ka dib ayaan Jibriil weydiiyay xaaladda Gaalkacyo. Wuxuu ii sheegay in uu mar dhoweyd arkay Cadde Muuse oo tuute gashan. Waan xusuustaa waxaan ku iri war ma odeydii weynaa baa tuute gashaday?
Arrintaa waan ka naxay. Cadde inkasta oo uu General ahaa haddana wuxuu ahaa nin oday ah, madax u ah maamul rayid ah, oo aan ku qaabsameyn dagaal. In uu fadhigiisa Garowe ka soo tago, Gaalkacyo yimaado, gashado tuute waxaan u arkay sansaan colaadeed oo meel xun mareysa.
Waxaan wacay oo aan arrinta ka hubsaday Cali Cabdi Awaare oo ahaa ganacsade iyo Wasiir Puntland oo uu naga dhexeeyay xiriir dhow oo shaqo iyo saaxiibtinnimo, isla markaana ay gacansaar fiican lahaayeen Cadde Muuse, markaana Gaalkacyo la jooga.
Inkasta oo aan London joogay, waxaan beryahaas ka soo laabtay Muqdisho. Waxaan soo xusuustay Madaxda Maxaakimtu in ay wareysiyo iyo sheeko intababa keey isugu fasireen in ay yihiin niman nabad-doon ah oo maslaxad raadis ah. Waxaa keey isu qaban wayday nabad-doonnnimo iyo in ay ku duulaan degaan aan Hoggaamiye Kooxeed ka talin oo nabad ah oo ay dadweyne fara badani ku nool yihiin oo cammiran.
Waxaan telefoonka kula hadlay Cumar Idris oo hadda ah Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Dooxa, berigaana ka tirsanaa Maxaakimta. Waxaan Cumar ku aqaannay in uu yahay dulmi-diid jecel in wadaxaajood xal lagu gaaro. Waxaan u fasiray xaaladda Gaalkacyo, waxaanan weydiiyay si dhiig loo baajiyo oo aan la isugu khaldamin bal in ay suurta gal tahay in Madaxda labada dhinac ay wadahadlaan.
Wuxuu qiray in ay habboon tahay oo uu dhinaciisa taa ka shaqeyn karo inkasta oo caawa ay tahay xilli dambe. Waxaan durbadiiba isbaray oo aan isku xiray Cali Cabdi Awaare iyo Cumar Idris. Waxaan u sheegay in howshan nabadraadinta ah ee aan galay aanay shaqadeyda ku saabsaneyn ee ay Soomaalinnimo iyo dar Allah iga tahay. Welibana laga yaabo in ay dhaawacdo kaalinteyda dhexdhexaadnimo haddii la is af garan waayo. Sidaa darteed waxaan ka codsaday labada mas'uul in aanay madaxda labada dhinac u sheegin in fikirkani uu aniga iga yimid.
Subaxnimadii xigtay waxaa aroor hore wakhtiga London hurdada iga kiciyay telefoon aan ka helay Cadde Muuse. Allah ha u naxariistee wuxuu si diirran iiga mahadceliyay iguna ammaanay nabaddoonnimada iyo Soomaalida wuxuuna ii sheegay in isaga iyo Shiikh Shariif ay wadahadleen, is af garteen, oo dagaal laga baaqsaday. Mahaddeeda Rabbi ayaa leh.
Allah ha u naxariisto General Cadde. Qoykiisa, ehelkiisa iyo saaxiibbadiisna samir Allah ha ka siiyo.
Posted by Yusuf Garaad at 04:40:00